Toamasina : mpikapoka « bois rond » sy mangalatra moto ireo jiolahy | NewsMada
Toamasina : mpikapoka « bois rond » sy mangalatra moto ireo jiolahy
Saron’ny polisin’ny Centrale ireo roa lahy malaza ratsy amin’ny fangalarana moto ao Tanambao Verrerie Toamasina. Tsy vitan’izay fa mbola velesin-dry zalahy amin’ny « bois rond » ny tompony mialoha ny hangalaran’izy ireo ilay moto…
Velondapa Patrick, 25 taona sy i Velondapa Australin, 26 taona ny anaran’ireto jiolahy malaza ratsy amin’ny halatra moto ao Toamasina ireto. Afakomaly izy ireo no voasambotry ny polisy taorian’ny fitoriana sy fitarainana marobe tonga teo am-pelatanan’izy ireo. Nifanehatra tamin’ny polisy anefa ry zalahy ka tratra tao Tanambao Verrerie Toamasina izy ireo. Araka ny fanazavan’ireo niharam-boina, novelesina hazo avy eny ambony moto izy ka nianjera tamin’ny tany. Nalain’izy roa lahy avy hatrany kosa ilay moto rehefa hitan’izy ireo fa tsy afa-mihetsika ny tompony. Mbola afaka niantso vonjy anefa ilay niharam-boina ka nifanehatra tampoka tamin’ny polisy teo am-panaovana ny asany ry zalahy.
Nohamafisin’ny tatitra avy amin’ny polisy kosa fa mahatratra 10 isan’andro ireo olona mametraka fitarainana amin’ny fahaverezana moto ary tsy vitan’ny voaroba moto fa mbola maratra ihany koa vokatry ny kapoka “bois rond” mahazo azy. “Misy tambajotra matanjaka ity halatra moto ity ary misy miray tsikombakomba amin’ny fanaovana taratasy sy fanovana haingana ireo kojakoja indrindra ny fanovana endrika sy loko ireo moto halatra ireo”, hoy ny kaomisera Razafindahy Manitra Fleurys. Mbola eo am-pikarohana ireo olona tompon’antoka amin’izany ny polisy. Tsy ny moto ihany no lasibatra fa ireo posy bisikileta ihany koa.